Atidoha: fampiharana mivelatra amin'ny sehatra rehetra ho an'ny famokarana | Avy amin'ny Linux
Amin'ny fotoana hafa dia niresaka momba ny fangatahana izahay manatsara ny famokarana mpampiasa eo amin'ny latabatry ny solosain'izy ireo. Ary ho an'ny lahatsoratra anio, hiresaka indray isika atidoha, izay mahaliana sy miasa loharanom-baovao misokatra sy fampiharana hazo fijaliana, tena ilaina amin'io lafiny io.
ankapobeny, atidoha Is a mpandefa, izay eo amin'ireo fiasa sy fiasa marobe, ahafahantsika manatsara ny asa fikarohana ataontsika ao anaty sy ivelan'ny solosaina.
Ny fotoana farany niresahanay atidoha, in Avy amin'ny Linux, dia ilay January 27 amin'ny 2017, rehefa tamin'ny kinova miorina, laharana 0.2.3. Aorian'izany dia niova ny fivoarany mandrapahatongan'ny Desambra 5 amin'ny 2017, rehefa navoaka, ny kinova azo antoka ankehitriny, laharana 0.3.2.
Tamin'io fotoana io teo aloha dia nilazalaza izahay atidoha toy ny:
"Izy io dia multiplatform, fitaovana loharano misokatra, novolavolaina niaraka tamin'ny rafitra elektronin'i Alexandr Subbotin, izay ahafahantsika mampitombo ny famokarana, miditra amin'ny fikarohana, fampahalalana, calculator, fampiharana, fizotran'ny fanakatonana, sns.".
Ampitomboy ny famokarana amin'ny Linux miaraka amin'ny Brain
Ary an'iza ireo fiasa lehibe mifantoka amin'ny famokarana mpampiasa dia:
Ny fampidirana default amin'ny fampiasa maro ao anaty rindrambaiko tokana.
Ny fahaizana mitady na miditra amin'ny rindranasa marobe amin'ny tsindry vitsivitsy monja.
Ny fahaizana mizaha ny rafitry ny rakitra miaraka amin'ny topi-maso ny atiny (fisie / lahatahiry).
Notohanan'ny API mahery izay mamela anao hitombo sy hanangana plugins anao manokana.
Fanamorana ny fidirana sy ny fampiasana, amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, noho ny fampiasana hitsin-dàlana tsara.
1 Cerebro: fampiharana misokatra sy miampita sehatra ho an'ny famokarana
1.1 Mametraka Cerebro amin'ny kinova miova 0.3.2
1.1.1 Mampiasà rakitra .Appimage
1.1.2 Mampiasa rakitra .deb
1.1.3 Mampiasa tahiry hafa
1.2 Fanamboarana bibikely fametrahana
1.2.1 Famonoana ny ati-doha mety
Cerebro: fampiharana misokatra sy miampita sehatra ho an'ny famokarana
Mametraka Cerebro amin'ny kinova miova 0.3.2
Araka ny hevitry ny Tranonkala ofisialin'ny fampiharana Brain, afaka ampiasain'ny mpampiasa ny Rafitra miasa malalaka sy malalaka, toa ny GNU / Linux, rakitra azo apetraka ao anaty endrika .AppImage, ao aminy 0.3.1 version. Nandritra ny Tranonkala ofisialin'ny Electron Technology, ao amin'ny fizarana fampiharana azy, misy fizarana ho an'ny atidoha, miaraka amin'ny fisian'ireo rakitra azo apetraka ao anaty endrika .AppImage y .deb, fa ao amin'ny azy 0.3.2 version. Ity rindrambaiko ity koa dia manana tranokala GitHub.
Mampiasà rakitra .Appimage
Hametraka atidoha mampiasa an'ity endrika apetraka ity ary aorian'ny fisintomana ny rakitra dia ireto baiko baiko manaraka ireto ihany no tokony hatao:
Mampiasa rakitra .deb
Mampiasa tahiry hafa
Ho an'ireo izay tia mametraka rindranasa amin'ny alàlan'ny tahiry, afaka mampiasa fomba hafa izy ireo, izay ahitana ny fisintomana ireto manaraka ireto .deb fisie hametraka ny misy toerana fitahirizana an'ny tranonkala voalaza, nantsoina Duck JAD - Repository. Aorian'izany dia miroso amin'ny fametrahana ny fonosana alaina sy ny fampiharana atidoha fanatanterahana ireto baiko baiko manaraka ireto:
Aorian'ny fametrahana ny fampiharana atidoha, amin'ny alàlan'ny fomba rehetra, sambany isika tsy maintsy manatanteraka azy amin'ny Atombohy ny fizarana Menu / accessories, ampifanaraho araka izay itiavantsika azy, ary aleo hamerina amin'ny laoniny tanteraka ny solosaina, hanombatombanana ny fiasan'izy ireo hatramin'ny rangotra.
Fanamboarana bibikely fametrahana
Mety hanao tatitra ny mpampiasa sasany tsy fahombiazan'ny fampiharana fampiharana, izany hoe ny tsy fanatanterahana ny interface graphique an'ny atidoha. Amin'ny tranga sasany dia ity no vahaolana mety indrindra:
Manokatra console ho an'ny root ary manaova ireto baiko sy fanovana manaraka ireto:
Ao amin'ny atin'ny rakitra dia ovao ny sandan'ny parameter "trackingEnabled" de True ny False. Tehirizo ny fanovana ary avereno jerena ny fampiharana marina ny Atidoha.
Votoatin'ny rakitra farany config.json
Hijery misimisy kokoa momba an'ity vahaolana ity amin'ny manaraka rohy.
Famonoana ny ati-doha mety
Raha izany no vahaolana, izay amiko dia niasa tamin'ny fahafaham-po Fahagagana 2.0, izay fanamboarana fatratra sy fanatsarana ny MX Linux 19, izay mifototra amin'ny DEBIANINA 10, hovonoina hovaina miaraka amina kisary eo amin'ny bara fizahana, ary rehefa hovonoina dia hitovy izao manaraka izao:
Manomboka izao dia mijanona ihany ny mianatra mampiasa atidoha, ary apetraho ny sasany misy plugins na mianatra mamorona anao manokana, to hampitomboina ny famokarana an'io fitaovana io amin'ny GNU / Linux.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Cerebro», izay mahaliana sy miasa loharanom-baovao misokatra sy fampiharana hazo fijaliana, tena ilaina tokoa hanatsarana ny famokarana eo amin'ny latabatr'ireo solosaintsika; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ati-doha: fampiharana Open Cross-Platform ho an'ny famokarana
arazal dia hoy izy:
Nohavaozina vao tsy ela izay? Niezaka izany aho tamin'ny fotoana nitadiavako mpisolo toerana an'ny QuickSilver (QS) izay tsy ao amin'ny GNU / Linux fa ny marina dia tsy tadidiko ny antony nanary ny marina. Amin'izao fotoana izao dia mampiasa Kupfer aho, tsy tonga lafatra izy io, fa tsara ho an'ny fampiasana fototra izay ampiasako azy io:
- Adikao ireo rakitra mihetsika
- Ovao anarana ny rakitra
- Mamorona ary mivezivezy amin'ny lahatahiry sy fitaovana samihafa
Hanana toky bebe kokoa izy io (manana plugins izy io) saingy hoy izy ireo ny safidy izay ampiasako indrindra, ary satria manana interface mitovy amin'ny an'ny QS izy dia mampahalala ahy izany.
Mamaly an'i arazal
Ny fanavaozana farany azy, araka ny voalazan'ny lahatsoratra, dia "tamin'ny 5 Desambra 2017, rehefa navoaka ny kinova miorina ankehitriny, laharana 0.3.2." Na izany aza, mandeha tsara izy io ary manana add-on (plugins) tena tsara izay mitazona azy io hiasa tsara. Ho fanampin'izay, ahafahanao miditra plugins vaovao noforonin'ireo izay manana fahalalana momba ny programa. Raha te hianatra bebe kokoa momba an'i Cerebro ianao dia amporisihiko ity fidirana manaraka ity, ny faharoa amin'ny 3, momba izany. Amin'ny voalohany dia manazava ny fomba isan-karazany amin'ny fametrahana azy aho, amin'ny faharoa ny fanamboarana sy ny fampiasana azy, ary tsy ho ela amin'ny fahatelo sy farany, ny fikirakirana add-on tena ilaina.
Azo antoka fa amin'ny lahatsoratra ho avy dia hiresaka momba ny fomba hafa hisolo an'i Cerebro toa an'i Kupfer sy i Albert aho.
Walter dia hoy izy:
maty ny tetikasa, ity misy safidy hafa.
Mamaly an'i walter
Miarahaba anao Walter! Amin'ity lahatsoratra farany ity ( https://blog.desdelinux.net/albert-kupfer-excelentes-aplicaciones-alternativas-cerebro-productividad/ ) nanoro hevitra an'i Ulauncher izahay fa tsy ho solony ny atidoha fa ho famenony, satria mandany loharanom-pahatsiarovana RAM be dia be i Ulauncher. Manoro hevitra aho ny hampiasa azy io tsy misy fanitarana miaraka amin'i Cerebro.
Linux Mint dia hanakana ny fametrahana snapd miafina
Navoaka sahady ny kinova Git 2.27.0 vaovao ary ireo no fanovana azy